High Quality 100% Viscose Mashini Yakakanda Thread
zvinhu: 100% viscose filament yarn
Count: 120D/2, 50D/2, 300D/2, 300D/1, 300D/2 * 3, 450D/1, 600D/1 nezvimwewo
Color: Makadhi emavara aripo uye akagadziridzwa mavara anogamuchirwa zvakare.
Apex Kurongedza pa20yds kusvika 5000yds mudiki chubhu kana hombe epurasitiki spool.
Yakasarudzika embroidery kuita
Kupenya kwakakwirira, kupfava kwakanakisa
Zvakanaka hydrophilic properties
Anti-static uye anti-pilling
Yakadhayiwa nedhayi dzinoshanda pa60 ℃, ine kupenya kwakanyanya uye kupenya kwakanyanya
Anopfuura makore makumi maviri ruzivo mune zvipfeko accessories.
Mahofisi emuno anodarika makumi mana pasi rose
382,000㎡ nzvimbo yekudyara uye 1900 vashandi
Usage: Iwo embroidery shinda akakodzera vakadzi masutu, silika, handbag, lace embroidery, nezvimwe.
Color: Uyu ndiye polyester embroidery thread kadhi yemuvara ine 800 mavara.MH ine otomatiki mavara anoenderana nemichina, saka isu tinokwanisa kugadzira yakaringana mavara anoenderana sampuli nekukurumidza.
Kusiyana pakati pe viscose uye rayon:
Musiyano mukuru pakati peRayon neViscose ndewekuti Rayon imhando yejira remachira rinogadzirwa kuburikidza ne Cellulose Kunyudza maitiro uye akagadzirwa kubva pahuni pulp uye jira rine yakakwirira kunyudza kugona, nepo Viscose imhando yejira remachira rinogadzirwa kuburikidza neCellulose xanthate process uye rakagadzirwa kubva kuPlant fiber uye jira racho rine kushomeka kwekugona.
Kuenzanisa Tafura Pakati peRayon neViscose
Chii Mhando yejira remachira iro rakagadzirwa kuburikidza Cellulose Kunyudza nzira uye yakagadzirwa kubva pahuni pulp. Mhando yejira remachira iro rinogadzirwa kuburikidza neCellulose xanthate process uye rakagadzirwa kubva kuPlant fibers.
Inoshandiswa mukati Mapazi ezvokurapa uye fenicha Zvipfeko
unaku Kutonhora nyorovera
Kubvisa kugona High Low
mutengo Low High
mukurumari Low High
Manufacturing process Eco-friendly Kwete eco-hushamwari
kutaura kuti ichokwadi: ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015, Oeko Tex Standard 100 Kirasi 1